Hal askari iyo ganacsade ku dhintay isku u dhaxeeya ciidamada Puntland oo ka dhacay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal askari iyo ganacsade ku dhintay isku u dhaxeeya ciidamada Puntland oo ka dhacay Garoowe
Ciidamo ilaalo ka haya xarunta madaxtooyada. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Hal askari ayaa la sheegay in uu ku dhintay isku dhac ka dhacay caawa Garoowe oo u dhaxeeyay ilaalada xarunta baarlamaanka Puntland iyo ciidan kale oo dowladda katirsan.
Ganacsade caan ah oo la oran jiray Cabdikariim Maxamed Faarax Dhagoweyne ayaa sidoo kale ku dhintay isku dhaca, sida ilo-wareedyo haayadaha amaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Labo qof oo kale oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay.
Lama oga sababta keentay isku dhaca khasaaruhu uu ka dhashay. Waxaana uu imaanayaa iyada oo baarlamaanka Puntland ay galeen muddo saddex beri oo fasax ah.
Waxaa jiray warar sheegaya in khilaaf xoogan uu u dhaxeeyo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dhoobo-daareed iyo madaxtooyada.
Bujumbura–(Puntland Mirror) Burundi ayaa maanta oo Isniin ah bilowday hanaanka ay ciidamadeeda u gala baxayso Howlgalka Midowga Afrika (AMISOM) ee guda Soomaaliya, iyadoo ay jirto khilaaf ka dhashay mushahaarka ciidamada. Xoogaga AMISOM ayaa waxaa mushahaarkooda [...]